mercredi, 16 janvier 2019 13:42
Déchéance des députés: Requêtes classées sans suite par la HCC ?
Au terme de l’Article 2 de l’Avis n°01-HCC/AV du 16 février 2018 relatif à une demande d’avis sur le sens et l’interprétation des dispositions de l’article 69 alinéas premier et 2 de la Constitution qui stipule que : « Les pouvoirs de l’Assemblée nationale et le mandat des députés qui la composent, issus des élections du 29 décembre 2013, arrivent à échéance le 5 février 2019 à minuit ».
Les requêtes du Groupe parlementaire Tiako Madagasikara représenté par son Président Mr Randriamandimbisoa Félix, aux fins de déchéance des députés Ravahimanana Guillaume Marie Ubald (Miarinarivo) et Andriamitantsoa Rahasindraibe Benjamin (Antananarivo Avaradrano) déposée le 29 mai 2018 ;
mercredi, 16 janvier 2019 12:05
Ambatobe: Sinoa notafihin’ny jiolahy mitam-basy
Omaly nanodidina ny tamin’ny 5ora hariva no nitrangan’ny fanafihana tsy lavitra ny Pharmacie Ambatobe – Antananarivo faha-5, manodidina ny Lycée Français, lalana miazo ny trano fonenan’ny filoha vaovao Andry Rajoelina.
Tao anaty fiara ilay Sinoa no narahina bandy efa-dahy nitaingina moto « scooter ». Nobahanan’izy ireo ilay fiara nitondra ilay Sinoa ary tamin’izay no nitakin’izy ireo ny hanomezana ny kitapo babena tany aminy sady nanambana basy. Nomen’ilay Sinoa ilay kitapo nisy vola be notakian’ireo jiolahy, dia lasa ireto farany, tsy nisy basy nipoaka.
mercredi, 16 janvier 2019 10:11
Lapan'i Mahazoarivo: Fivoriana mikasika ny ady amin’ny valanaretina kitrotro
Notanterahina teo anivon’ny Primatiora ny fivoriana mikasika ny valanaretina Kitrotro, izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian, niarahany tamin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’ny firenena Malagasy sy ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny amin’ny minisitera voakasika.
Nanazava ny Praiminisitra fa efa maro ny distrika no voakasiky ny valanaretina kitrotro ary efa miditra amin’ny dingana voalohany amin’ny fanentanana fanaovana vaksiny isika izao, ka hitohy hatramin’ny volana aprily izany.
Ho any Burundi isika: Aza maniry ny fisian'izany adi-poko izany
Tany amin'ny taona 1996, dia niantso ahy ny fikambanana momba ny demokrasia Amerikanina iray, ny hidirako amin'ny fampiraharahana atao any Burundi.
Namaivay tamin'izany ny adi-poko, nisy teo amin'ireo Hutus sy Tutsis, izay nihitatra teo amin'ny firenena manodidina dia Rwanda, Congo ary Tanzania.
Nanontany azy aho, maninona no izaho no nantsoina ary inona no ho vitako any.
Nanazava tamiko ilay Amerikanina fa ny taona 1993 no voalohany nanao fifidianana andraisan'ny rehetra anjara i Burundi hatramin'ny 1962 nazahoany fahaleovan-tena, ka ianao hoy izy anisan'ny nanangana ny KMF/CNOE mpanara-maso ny fifidianana tamin'ny 1989, nanombohan'ny Madagasikara nanao fifidianana nandraisan'ny rehetra anjara.